Not quite Francis Bacon: Female artist who is living naked with pigs for 104 hours
ဖန်တီးမှုအနုပညာရှင်ရဲ့ ဝက်များနှင့် ၎ရက်တာ
သူမအနေဖြင့် ရေဂါပိုးမွှားများအားကြောက်လန့် တတ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ်...
သို့ သော်လည်း သူမရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည့် ခံစားမှုအနုပညာသရုပ်ပြမှုအတွက် မီရူကင်မ် တစ်
ယောက် ၀က်တွေနဲ့ အတူ ၁၀၄ နာရီတိုင်တိုင်အတူနေထိုင် (အိပ်စက်၊နေထိုင်၊စားသောက်) ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ 
ယခင်ဆေးပညာကျောင်းသူဟောင်းဟာ ဘေဆယ်မီယာမီအနုပညာခမ်းမတစ်ခုရှေ့ တွင်ဖန်တီးထားသည့် 
၀က်ခြံတစ်ခုအတွင်းတွင်အ၀တ်ဗလာ၊ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် နေထိုင်မှာဖြစ်ပြီး လာရောက်ကြည့် ရှုသူများအနေ
ဖြင့် မှန်ချပ်များသာခြားပြီး သူမ၏ဗလာအနုပညာသရုပ်ပြမှုအား သဘာဝအတိုင်းမြင်တွေ့ နိုင်မှာဖြစ်ပါ
ဗလာကလာတဲ့ သူမို့ ဗလာထဲပြန်သွားတဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှုပါ...
ထူးတာကတော့ သူမက ၀က်တွေကိုခင်မင်နှစ်သက်တာမို့ ဝက်များနဲ့ ၎ ရက်ကျော်နေထိုင်မှာ
Performance: Miru Kim lies with two pigs inaglass enclosure as part of an art installation, I Like Pigs And Pigs Like Me. She will live with the animals for 104 hours. 'When I mingle with pigs, I feel my existence more than ever,' she said
၀က်များနဲ့ အတူတူ အ၀တ်ဗလာနဲ့ နေဖို့ ဆိုတာတစ်ခြားသူတွေအတွက်တော့ စိတ်တောင်မကူးရဲ
ပေမယ့်ခံစားမှုအနုပညာအနေနဲ့ ကတော့ ဒါဟာအဆင့် မြင့် တဲ့ ဖန်တီးချက်ပါပဲတဲ့ ...
Spending four days naked insideaglass box living and sleeping with pigs might not be everyone idea of fun, but the performance artist calls it high art
ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကစိတ်စွဲလမ်းမှုအားကြီးသည့် ဝေဒနာခံစားခဲ့ သည့် အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိအမျိူးသမီး
အနုပညာရှင်အတွက် ယခုကဲ့ သို့ (၀က်များနှင့် အတူ) ညစ်ညစ်ပါတ်ပါတ်နေထိုင်ဖို့ ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ 
" ဒီနေရာက စီးပွားဖြစ်အကြီးကျယ်(၀က်မွေးခြင်း) လုပ်တာမို့ အနံ့ ကတော့ တော်တော်ပြင်းပါတယ်..." လို့ 
သူမက ဟပ်ဖ်ဖင်းတန်သတင်းစာကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အနုပညာတစ်ခုပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့ စဉ်ကဆိုယင်ကျွန်မစိတ်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်ခဲ့ ရပါတယ်...ရိုက်ကူးမှုပြီး
သွားသော်လည်း ခြေထောက်က အနံ့ ကိုဖျောက်လို့ မရတာမို့ အတော်လေးစိတ်ညစ်ခဲ့ ရပါတယ်..." လို့ သူ
ကိုရီးယားတွေးခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦး၏သမီးဖြစ်သည့် ကင်မ်ဟာ အ၀တ်အစားများချွတ်ကာ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့်
သူမကိုယ်သူမ စွန့် ပစ်ထားသည့် စက်ရုံပျက်များ၊ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများ၊ တံတားများတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ 
သဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သူမအနေဖြင့် အမှောင်ကိုကြောက်ခြင်း၊ အန္တရယ်ဖြစ်စေတတ်သည့် နေ
ရာ၊ အခြေအနေများကိုကြောက်ခြင်း၊ ညစ်ပါတ်ပေကျံမှုကိုကြောက်ခြင်း စသည်များကို ကျော်လွှားနိုင်တယ်
လာမည့် ၎ ရက်လုံးလုံး ကင်မ်ဟာ ၀က်တွေနဲ့ အတူတူစား၊ အတူတူသွား၊ အတူတူအိပ်မှာပါ...
Dedicated: Kim will eat and sleep alongside the animals for the next four days
သူမရဲ့ အ၀တ်အစားမဲ့ ခ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် သရုပ်ဆောင်မှုအနုပညာတွေလုပ်လေ့ ရှိတာမို့ 
Baring all for her art: Kim, who has gained notoriety for producing art involving her own naked body, is performing at Art Basel Miami. The former medical student said her work helps her overcome her fears
ကျွန်မက၀က်တွေကိုချစ်သူလို ၀က်တွေကလည်းကျွန်မကိုချစ်ပါတယ်...လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ 
ကင်မ်ရဲ့ ဝက်အနုပညာ၊ ဗလာ ကိုလာရောက်ကြည့် ရှုခံစားတဲ့ ပရိတ်သတ်...
Bemused and confused: Visitors watch as Kim lies with two pigs withinaglass enclosure. The Miami installation is called 'I Like Pigs and Pigs Like Me (104 hours)'
သူမဟာယခုကဲ့ သို့ ကျွန်မကလည်းဝက်တွေကိုချစ်သလို၊ ၀က်တွေကလည်းကျွန်မကိုချစ်ပါတယ် သရုပ်ပြ
မှုအား ပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင် မိုက်ကယ်ဆီရက်စ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားအကြောင်းရေးထားသည့် ပဉ္စအာရုံ၊
သမူဟ္ဓခန္ဓာအတွေးအမြင် စာအုပ်ပြီးနောက် ပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးရလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
"အရေပြားဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအားဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားရုံတင်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့် အပြင်အာ
ရုံခံစားမှုကို ဆက်သွယ်ပေးရုံ မျှမကပါဘူး...
အတွင်းစိတ်နဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကိုလည်းဆက်သွယ်ပေးရာဖြစ်သလို ကိုယ်ကာယကြီးနဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်တို့ ဆက်သွယ်
ကျွန်မ၀က်တွေနဲ့ အတူသွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်ရတော့ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်တည်မှုဟာယခင်ကထက်ပိုပြီးထင်ရှား
လာတယ်လို့ ခံစားသိရှိလာခဲ့ ပါတယ်..."လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကင်မ်ဟာ နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားလျှက်ရှိစဉ် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်
ရာသင်ခန်းစာများမှာ ၀က်များနှင့် ပါတ်သက်ပြီးအထူးနှစ်ခြိုက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူမဟာ တိရိစ္ဆာန်များကို ထူးထူးခြားခြားချစ်ခင်နှစ်သက်လာခဲ့့ပါတော့ တယ်...
ထိုစဉ်ကတည်းက ၀က်တွေရဲ့ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ အရေပြားအရောင်က ကျွန်မတို့ နဲ့ နီးကပ်စွာရှိနေတာကိုသတိပြု
မိခဲ့့တာဖြစ့်ပါတယ် လို့ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံး စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" ၀က်တွေဟာ အာရုံခံစားမှုကောင်းတယ်၊ အသိဥာဏ်ထက်မြက်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေဖြစ်တယ်...
ဒီဝက်ခြံတွေထဲက ၀က်လှောင်အိမ်ထဲကိုကျွန်မ၀င်တော့ သူတို့ က အစပထမမှာကြောက်စိတ်၊ စူးစမ်းစိတ်
နဲ့ တုန့် ပြန်တတ်ကြပါတယ်..." လို့ သူမဆိုပါတယ်...
ကင်မ်အားနာမည်ကျော်စေခဲ့ တဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအနုပညာပြကွက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် 
တူရကီနိုင်ငံ၊ အစ္စတန်ဘူးလ်မြို့ ဗလီတစ်ခုအနားအဆောက်အဦးထိပ်မှ သရုပ်ဖော်တင်ပြချက်...
Turkish delight: Artist Miru Kim has earned international acclaim by taking photos of herself in the nude in unusual spots such as this area of Istanbul
အနီးအနားမွေးမြူရေးခြံမှ ၀က်ကလေးနှစ်ကောင်အားသရုပ်ပြတင်ဆက်မှုတွင်အသုံးပြုမှာမို့ မီရူဟာ ယခု
ရက်သတ္တပါတ်တွင်ကျင်းပပြီးစီးမည့် ထိုပြကွက်ကြောင့် ထိုဝက်ကလေးများအားအသက်ဘေးမှကယ်တင်နိုင်
" ဒီဝက်ကလေးတွေဟာ သူတို့ ကိုအိမ်မွေးအချစ်တော်တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးနိုင်မည့် သူကိုကျွန်မတို့ ရှာနေ
တာမို့ တွေ့ မြင်စကထက်ပိုပြီး အခြေအနေကောင်းတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဆက်လက်ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါ
တယ်..." လို့ အမေရိကန်၊ကိုရီးယား ကပြားအနုပညာရှင်ကဆိုပါတယ်...
သူမရဲ့ ယခုမီယာမီပြပွဲဟာ သူမအတွက်တော့ ပထမဦးဆုံး ၀က်များနဲ့ အတူနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး...ယခင်က
လည်း သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများကို ဓါတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ ခဲ့ ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်...
လာမည့် စနေနေ့ တွင်ပြီးဆုံးမည့် သူမရဲ့ တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပြသမှုအစီအစဉ်ဟာ ယခင်သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံပြပွဲ
များက မပေးနိုင်ခဲ့ သည့် ခံစားချက်များအားပေးဆပ်နိုင်လိမ့် မည်ဟု သူမကမျှော်လင့် ထားပါတယ်...
" ဓါတ်ပုံများကပေးဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ခံစားမှုသဘောတို့ ၏ထိတွေ့ ခြင်းဆိုင်ရာအနုပညာအာရုံများကို ပြည်သူ
တွေအနေနှင့် ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဝက်တွေအတူလှုပ်ရှားသွားလာနေခြင်းမှ နားလည်နိုင်လိမ့် မည်ဟုကျွန်
မဆန္ဒရှိပါတယ် ..." လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကိုရီးယားတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးရဲ့ သမီးလည်းအတွေးအခေါ်တွေကတော့ လန်းနေတာပဲ ...
အဲဒီလို ၀စ်လစ်စလစ်အနုပညာမျိူးကတော့ အမျိူးသားထုကြီးအကြိုက်ပေါ့ ...
She admits she hasafear of germs.
But for her new art installation, Miru Kim has decided to live with pigs for 104 hours, non-stop.
The former medical student is staying inapen at the front of one of the galleries at Art Basel Miami 2011, and visitors can watch her, naked, through the window.
She will eat and sleep alongside the animals for the next four days.
And getting down in the dirt wasn't easy for the 30-year-old, who suffered badly with obsessive-compulsive disorder asachild.
'It'savery concentrated industrial environment, so the level of smell is toxic,' she told the Huffington Post.
'I get intoamental zone when I am doingashoot. After I'm done, however, if I can't get the smell off my feet, it's very disturbing.'
Kim, the daughter ofaKorean philosopher, has gained notoriety for stripping off and photographing herself naked in strange places such as abandoned factories, tunnels and bridges.
She said the work helps her get over her fears - 'fear of darkness, fear of dangerous activities in general, and fear of dirt'.
She was inspired to create I Like Pigs And Pigs Like Me after reading French philosopher Michel Serres's book Five Senses: A Philosophy of Mingled Bodies, which explores the characteristics of skin.
'Skin is not only an envelope protecting the inner body, oramembrane that allows exchange between exterior and interior of the body,' Kim said. 'It also serves asamingling point between the outer world and inner self, and between body and soul.
'When I mingle with pigs, I feel my existence more then ever.'
Kim became fascinated with pigs duringauniversity dissection when she wasastudent at Columbia University in New York.
But she went on to developastrong attachment to the animals.
'That is when I noticed that their anatomy and skin colour is close to ours,' said Kim about her first intense encounter.
'Pigs are sensitive, intelligent creatures and when I enter the pen with them on these farms they react with fear or curiosity at first.'
Using two normal pigs fromanearby farm, Miru will literally save their bacon after the weekend's performance is up.
'They will leadavery happy life and are already better off than when we found them," said the America-Korean artist.
'We are looking to place them as pets withafamily or atacommunity farm after the show.'
Her Miami performance isn't the first time Kim has lived with pigs, but previously, visitors had only been able to see photographs of her experience.
Now she's hoping her live performance, which ends on Saturday, will convey elements that her previous photo series couldn't.
'I want people to feel the process of my body mingling with pigs, the sense of touch that is harder to grasp in the final photographs,' she said.
Posted by peter kyaw | at 10:03 PM |
သေသေချာချာ သိပ်မမြင်ရဘူးနော်..မျက်နှာကို ပြောပါတယ်...။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ... နှစ်သစ်တစ်ခုရောက်ခဲ့ ပြန်လေပြီ......
ပျော်သလားဟေ့ မောင်တို့ ရေ... ပျော်စရာတွေ့ ယင်၊ သိ...
Nasty tackle split footballer's scrotum
Bangladesh village captivated by dog-monkey bond
Only in Africa (2)...
Only in Africa (1) ...
'I've gotasurprise for you': Husband blindfolds ...
Students claim haunted toilet is causingthem to fa...
ကိုရီးယားမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို....(၂) နေ့ စဉ်၊...
ကိုရီးယားမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို (၁) ..... နေ့ စ...
He's nailed it! Stuntman Li Xin balances on his he...
The Most Powerful Images Of 2011 (2)ဘာလိုလိုနှင...
Islamic cleric questions women touching bananas an...
The Most Powerful Images Of 2011 (1)ဘာလိုလိုနှင...
ကိုကို့ ညီမ... လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချူပ် ယင်လပ်ရှ...
ပူနွေးဆူဝေ၊ ကမ္ဘာမြေ... Global warming လို့ ခေါ်တဲ...
Not quite Francis Bacon: Female artist who is livi...
Zimbabwean man collapses as he discovers prostitut...
Malaysians 3rd most unfaithful in the world
Only in Latin America....
Man forces lover to wear chastity belt
431 coins, 196 pellets and 17 small bolts: Man die...
Tainted pork: China sentences 113